Akaryn Hotel Group dia mandefa trano fisakafoanana vaovao any Indonezia sy Vietnam
Home » Lahatsoratra farany farany » Hospitality Industry » Akaryn Hotel Group dia mandefa trano fisakafoanana vaovao any Indonezia sy Vietnam
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao Mafana Vietnam
Akaryn Hotel Group, mpandraharaha trano fandraisam-bahiny mihaja ao Thailandy, dia miomana hanaparitaka elatra ary hiditra amin'ny tsena iraisam-pirenena voalohany, miaraka amin'ny fanombohana ireo marika fandraisam-bahiny misimisy ao Indonezia sy Vietnam.
Amin'ny volana ho avy, ny roa amin'ireo hevitra hotely ao amin'ny vondrona no hanao ny laharam-pahamehana iraisam-pirenena. Aleenta, marika lafo vidy tsy misy kapa tsy miova, izay nanomboka voalohany tany Thailand tamin'ny 2004, dia hatolotra an'i Bali, "Island of the Gods" any Indonezia, ary ny akyra, ilay marika fivarotana butikety, dia ho tonga ao Hoi An, ny UNESCO World Heritage- tanànan'ny seranan-tsambo ao Vietnam afovoany.
Aleenta Retreat Bali dia ho fitoerana masina any amin'ny tendrombohitra avaratry ny nosy, adiny iray miala an'i Ubud. Namboarina tamin'ny fomba Bali ambany fisondrotana kilasika, ity fialan-tsasatra am-pilaminana ity dia hahatsapa kilometatra iray kilometatra miala ny toeram-pizahantany mpizahantany any atsimon'ny nosy. Ao amin'ny havoana matevina sy mitafy ala, ity toerana miafina mahafinaritra io no ahafahan'ny vahiny miala sasatra sy mifandray indray ao amin'ny paradisa.
Hanana fotoana be dia be hivoahana ireo vahiny sy hizaha ny faritra eo an-toerana, ao anatin'izany i Ubud, renivohitry ny kolontsaina any Bali. Aleenta Retreat Bali dia hanome toerana marevaka ihany koa ho an'ny fampakaram-bady sy fety, miaraka amin'ny safidin'ny efitrano hetsika anatiny na alfresco.
Hanokatra varavarana ihany koa amin'ny taona 2019 i Akyra Hoi An, toeram-pialofana amoron-drano tsy manam-paharoa eo afovoan'ny afovoan-tanàna manan-tantara ao Hoi An sy ny Golden Beach China. Any amoron'ny havoanan'i Thu Bon, ity fitsangatsanganana butikety ambany ity dia ho azon'ny fiara na sambo ary maro amin'ireo efitrano 110 sy villa pisinina XNUMX no hipetraka eo amoron'ny rano.
Ny vahiny dia afaka misitrika ity toerana mahavariana ity miaraka amina kilasy yoga maraina, fitsaboana spa ao amin'ny foibe Ayurah Wellness, milentika ao anaty onsen na fiofanana ao amin'ny foibe fanatanjahan-tena maoderina. Raha tsy izany, afaka miditra ao anaty dobo tsy manam-petra any ivelany izy ireo.
akyra Hoi An dia hanome fifandanjana tonga lafatra eo amin'ny fikarohana ara-kolontsaina sy ny fialan-tsasatra tropikaly; ny tanànan'ny seranana manintona an'i Hoi An, miaraka amin'ny lova maro samihafa sy ny maritrano manintona, dia lavitra kely fotsiny, raha mora azo ihany koa ny fasika volamena sy ny ranomasina azure amin'ny morontsiraka afovoan'i Vietnam Izy io koa dia hanome sehatra mahavariana ho an'ny hetsika sy fampakaram-bady nofinofy.
“Miaraka amoron-dranomasina milamina sy mahafinaritra izy, eo anelanelan'ny tanàna sy ny ranomasina, akyra Hoi An dia hamela ny mpitsidika hahita izay rehetra atolotry ity toerana mahafinaritra ity. Ny vahiny izay efa niaina trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny akyra tao Bangkok, Phuket ary Chiang Mai dia hahafantatra ny fomban'ny fironana. Manantena ny hampahafantatra ny vahiny amin'ny vanim-potoana vaovao fampiantranoana ankehitriny sy farany ao amin'ity toerana mahafinaritra ity izahay, "hoy i Anchalika nanampy.
Akaryn Hotel Group dia miasa amina hotely sy trano fandraisam-bahiny mahasarika erak'i Thailand, ao anatin'izany i Aleenta Hua Hin-Pranburi, Aleenta Phuket-Phang Nga, akyra Beach Club Phuket, akyra Manor Chiang Mai, akyra Thonglor Bangkok ary ny fanampiana vao haingana indrindra amin'ny portfolio-ny , akyra TAS Sukhumvit Bangkok. Ity vondrona ity dia hanohy hampahafantatra ny fomba fandraisam-bahiny azafady sy manokana ny fandraisam-bahiny aziatika amin'ny toerana itodiana bebe kokoa manerana ny faritra amin'ny volana sy taona ho avy.